Ukuhambisana kweMexidol neCombilipene > Ukwelashwa nokuvimbela
Ingabe iMexidol neCombilipen zingasetshenziswa ndawonye?
I-Combilipen ikhona ngesimo samathebulethi nangesisombululo sezisombululo ezingavinjelwa. Banokuhluka ngokwakhiwa. Isebenza ngokushesha ngomjovo we-intramuscular. Lapho isimo sesizinzile, singashintshwa ngamathebulethi. Ku-ampoule eyodwa, 2 ml yesidakamizwa, okubandakanya amavithamini B1, B12, B6 kanye ne-lidocaine.
Umuthi utholakala ngezindlela ezintathu: kumathebhulethi ayi-125 mg, kusixazululo somjovo ngokuqinisa noma nge-intramuscularly 50 mg / ml nangendlela yokuxubha izinyo. Kwandisa ukumelana ne-hypoxia, kuthuthukisa ukusetshenziswa komoya-mpilo, kuvikela ingemuva langemizwa yengqondo, futhi kunciphise imizwa yokukhathazeka nemizwa yokwesaba.
Yini esiza ngokusetshenziswa kanyekanye
I-Combilipen iqukethe amavithamini we-B, anomphumela onenzuzo ekwelashweni kwezifo zesistimu ye-musculoskeletal kanye nohlelo lwezinzwa. I-B1 isiza ukudlulisa ukungahambisani kahle kwe-nerve, i-B6 isebenzisa izinqubo ze-metabolic, futhi i-B12 ibamba iqhaza kwi-hematopoiesis.
Ukuxilongwa okwenzelwe ukwelashwa kweCombilipen yile: i-neuralgia ye -ostostal, i-osteochondrosis yomlomo wesibeletho, i-lumbar syndrome, i-trigeminal neuralgia, i-facial neuritis, i-alcoholopic alcohol.
I-Mexicoidol isetshenziswa ekwelapheni i-pathologies yesistimu yezinzwa, lapho ukugeleza kwegazi kuphazamiseka, lapho ilulama ekudakweni kotshwala noma i-atherossteosis.
Ukusuka ekusetshenzisweni kweKombilipen, kungavela i-kropivnitsa, ukulunywa esikhunjeni, i-Quincke edema, ukwehluleka ukuphefumula, i-tachycardia. Umlomo owomile, isicanucanu, kanye komzimba yimiphumela emibi ye-mexidol. Ukomela, uhudo, nokuqhakaza kungavela. Uma ungabaza, kufanele uyeke ukuthatha imishanguzo futhi ufune izeluleko kudokotela wakho.
Romanenkova A. A. Dermatologist
Ukwakheka kwekhwalithi okulinganiselwe kweqembu B. Umsebenzi, isidakamizwa osebenzayo. Ngisebenzisa ekwelashweni okuyinkimbinkimbi ekwelapheni i-eczema ye-dyshidrotic, i-psoriasis. Kube nezimo zobuhlungu ngokwethulwa kweCombilipen. Imiphumela yokungezwani komzimba kungenzeka.
U-Grishin A.V. Proctologist
Ukulungiswa okuhle kokuhlanganiswa kwamavithamini we-B. Kuvame ukubekelwa iziguli endaweni yokwamukela. Kubekezelelwa kahle iziguli, kukhona ukungahambi kahle okuhambisana ne-hypersensitivity kunoma iyiphi ingxenye. Inani elifanele lemali.
UVera, oneminyaka engama-33, uStavropol
Inhlanganisela ibekelwe umama ngemuva kokushaywa unhlangothi. Ukuthuthuka kwabonwa ngokushesha - ukuphathwa ikhanda kwanyamalala.
U-Ala, oneminyaka engama-50 ubudala, eSergut
Inikezwe umyeni wayo i-pancreatitis ngendlela yama-droppers. Izidakamizwa zisiza ukululama futhi zinciphise imiphumela enobuthi yotshwala emzimbeni.
Umuthi one-antioxidant, antihypoxic, antitoxic kanye nemiphumela yokuvikela ukucindezela. Isiza ukumisa ukwakhiwa kwama-free radicals. Kwandisa ukumelana komzimba ezintweni ezilimazayo. Ukwazi ukuhlela kabusha umsebenzi wama-enzymes we-membrane nama-receptors. Njengomphumela wokusetshenziswa kwayo, izinga le-dopamine ebuchosheni liyakhuphuka.
Izici zokwelapha zomuthi ziholela ekuhlinzekweni kwegazi okuthuthukile kuya ezingqondweni nasekushintsheni (ngokubheka okuhle) ekwakhiweni kwegazi. Ngokuvuma izifundo, kuthuthukisa ukuvuselelwa kwezicubu. Izinkomba zingama-pathologies obuchopho, izilonda zemithambo ye-atherosulinotic.
Umuthi ngamunye unemiyalo yawo yokuthi isetshenziswe. Kepha kungenzeka ukuhlukanisa izimo lapho kululeka ukwabela khona ngokuhlangana. Phakathi kwazo kukhona:
ukulimala ezimpandeni zomgogodla,
i-polyneuropathy yemvelaphi yotshwala noma ehlotshaniswa nesifo sikashukela mellitus,
ukuqinisa umphumela wokuqokwa kwezidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala,
i-arthrosis, isifo samathambo kanye nezinye izifo zesistimu ye-musculoskeletal.
Kunconywa ukusebenzisa umuthi ngemuva kokubonisana nodokotela oyi-neurologist, i-rheumatologist, i-traumatologist futhi uye kodokotela bakwelinye ikhono.
Ekwelapheni kwezinkinga zesistimu yezinzwa
Ukwelashwa kwe-neurology pathology, izidakamizwa zithathwa ngale ndlela elandelayo:
I-Mexicoidol iphathwa ngaphakathi kwethambo (ihlanjululwe kusawoti), umthamo wansuku zonke ufinyelela ku-2 g. Uma kungalingani noma ukhuluphele, ukubalwa kwenziwa ngokuhlukile - 10 mg / kg.
I-Combilipen inqunywe kuphela nge-intramuscularly, inkambo yokwelashwa iyizinsuku eziyi-7-10.
Uma kwenzeka imivimbo kanye nezifo zengqondo ngemuva kokwelashwa ngezindlela zokujova, amaphilisi anqunyelwa inkambo efinyelela ezinyangeni ezi-2.
Ukuthatha iCombibipen kungadala ikhanda, isiyezi.
IMexidol neCombilipen zithathwa ngobuhlungu obukhulu. Imithamo kanye nesikhathi sokuphathwa kulawulwa ngudokotela ngemuva kokuhlolwa. Kwi-pathologies engapheli (i-osteochondrosis, izifo ezihlangene), anqunywe ngomjovo kuze kufike ezinsukwini eziyi-10. Ngemuva kokulimala, kufaka ne-craniocerebral, inkambo yokwamukelwa ingathatha izinyanga ezi-2.
Sviridova Yu. V., udokotela wezokwelapha
Iziguli ezinokuhlonza okuhlukile ziyangithinta, kuvame ukwenzeka ukufeza umphumela omuhle wokwelapha lapho kunquma inhlanganisela yeMexidol neCombilipen.
USerikov D. D., udokotela wezifo zengqondo
Akukona njalo ukufeza umphumela wokwelapha osheshayo futhi oshiwo, kepha lokhu kungenxa yobunzima besimo sokuqala somuntu. Imvamisa ngibeka inhlanganisela yezidakamizwa ngesikhathi sokuvuselelwa ngemuva kokuhlinzwa emalungeni nasemgogodleni.
UTamara Vasilievna, oneminyaka engama-62
Eminyakeni engaphezu kwengu-15 edlule, kwatholakala ukuthi une-osteoarthrosis ekhubazayo. Amalunga ahlala elusizi, evuvukala. Izikhathi ezi-2 ngonyaka (esikhathini esingaphandle kwesizini), oweluleki unquma iMexidol ngeCombilipen. Angisho ukuthi ngizwa ngokushesha, kepha kukhona ukuthuthuka.
Imithi ebekiwe ngemuva kokususwa kwejoyinti ehlombe. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, isihlalo saphukile, kwaqhamuka ikhanda. Ngemuva kokuqedwa kwemijovo, lesi simo sibuyele kwesijwayelekile.
Isixazululo seMexidol sisebenza ngokuphathwa ngaphakathi (ngokusakazwa, ngokudonsa) noma nge-intramuscularly. Lapho wenza i-infusions, isidakamizwa sihlanjululwa ngendlela engu-0.9% sodium chloride solution. Iithebhulethi zithathwa ngomlomo, kathathu ngosuku, 125-250 mg. Kufika kuma-1200 mg wesidakamizwa kuma-ampoules nokufika ku-800 mg kumathebulethi angasetshenziswa ngosuku.
Imijovo yeKombilipen inikezwa emafutheni, 2 ml ngosuku ngezinsuku ezi-5 ukuya kwezi-10. Ngemuva kwalokho afakwa kancane (kabili-kathathu ngesonto) noma ashintshele amaphilisi. Lokhu kokugcina kuthatha i-1 pc. Izikhathi ezi-1-3 ngosuku. Isikhathi sokwelashwa sinqunywa ngudokotela.
I-Mexicoidol iyahambelana nayo yonke imithi esetshenziselwa ukwelapha izifo ze-somatic. Umuthi ukhulisa ukusebenza kwama-antidepressants, ama-benzodiazepines, ama-anxiolytic, ama-antiparkinsonian nama-anticonvulsants. Yehlisa imiphumela enobuthi ethanol.
IKombilipen ayihambelani ne-ascorbic acid nosawoti wezinsimbi ezisindayo. I-Ethanol ivimbela ukumuncwa kwe-thiamine, futhi iLevodopa inciphisa ukusebenza kwevithamini B6. Ngesikhathi sokwelashwa, ama-multivitamin complexes anokuqukethwe kwamavithamini we-B akufanele athathwe.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi i-thiamine ayihambelani nezinto ezinciphisayo nezinama-oxidizing, i-Riboflavin, i-Dextrose, i-benzylpenicillin, i-Phenobarbital ne-sodium metabisulfite. Ezixazululweni eziqukethe ama-sulfites, iyabola.
Lapho kukhonjiswa umuthi ohlanganisiwe
Ukuhambisana kweMexidol neCombibipen kuvumela ukusetshenziswa kwenhlanganisela yezidakamizwa ekwelapheni ama-pathologies wezinzwa ezinzima:
ukugula kwe-cerebral flow flow disorder,
ukukhathala okukhulu kwemizwa (i-cerebration),
ukululama emuva kokushaywa unhlangothi,
Ukuhlanganiswa kweCombilipen neMexidol kuthuthukisa isimo sesimo sengqondo nesiguli, kuvuselela umsebenzi wengqondo futhi kukhuphule ukumelana nengcindezi.
Ngaphezu kweCombilipen neMyxedol, izidakamizwa ezivela kwamanye amaqembu zinqunyelwe ukwelashwa kwezifo. Amavithamini nama-antioxidants angahlanganiswa nama-NSAIDs (Diclofenac), ukuncipha kwegazi (iWarfarin, iHeparin) nezinye izidakamizwa eziningi. Udokotela ukhetha inhlanganisela yezidakamizwa ngawodwana, ecabanga ngezimpawu zokuphazamiseka kwemizwa.
Imithetho yokusebenzisa ngasikhathi sinye
Uma kunikezwa umuthi owodwa ezibhebheni, kanti omunye udinga ukufakwa, khona-ke ayikho imibuzo - imishanguzo ithathwa ngokwezinhlelo ezibekiwe. Ukungabaza ezigulini kuphakama lapho imijovo yaseKombilipen inqunywa kanye neMexidol.
Lapho usebenzisa amafomu omjovo, imithetho eminingana kufanele ibonwe:
I-Combilipen inikezwa kuphela nge-intramuscularly, kanti iMexidol ingafakwa emgudwini futhi ibe yi-vein (injekishini noma i-dropper),
Ungahlangani kwisirinji eyodwa. Naphezu kweqiniso lokuthi ungathatha iMexidol neCombilipen ngasikhathi sinye, ukuxuba amafomu omthamo we-liquid akwamukeleki. Uma zombili lezi zidakamizwa zinqunywe intramuscularly, khona-ke yenza imijovo emi-2 ngama-syringes ahlukile.
Imijovo inikezwa izinsuku ezingama-5, kuthi-ke, uma kunesidingo, isiguli sinqunywe amasonto ama-2 ukuphuza amaphilisi. Amaphilisi angadakwa ngasikhathi sinye, ngaphandle kokuhlafuna nokuphuza amanzi.
Inhlanganisela yeCombilipen neMyxedol ivumela isiguli ukuthi sibuyisele izicubu zemizwa esephele, sihlanze amaseli ama-antioxidants kanye nobuthi, futhi kusheshiswe ukwenziwa kabusha ezingeni lamaselula. Udokotela ukhetha indlela yokusebenzisa nesilinganiso somthamo ngamunye.
Vidal: https://www.vidal.ru/d drug/combilipen_tabs__14712
I-overdose yaseMexidol ihambisana nokubonakala kokwezela, neCombibipen - isiyezi, tachycardia, ukujuluka, isicanucanu, ukuhlanza, urticaria, ukulunywa.
Uma isimo sibangelwa umuthi womlomo, kuyadingeka ukuthi uhlambe isisu uthathe i-sorbent. Ukwelashwa kwezimpawu kuyanconywa futhi.
Ungawufaka kuphi umjovo
Uma isiguli sinikezwe imijovo, izidakamizwa ziphiwa ngokwahlukana:
I-Combilipen kumele iphathwe ngendlela efanelekile,
I-Mexicoidol ingagxotshwa emisipha nasesithanjeni (injekishini noma i-dropper kusawoti).
I-Combilipen kumele iphathwe nge-intramuscularly.
Izixazululo zomjovo azihlangani. Uma zombili lezi zidakamizwa ziphathwa nge-intramuscularly, imijovo emi-2 yenziwa ngama-syringes ahlukile.
Umuthi awukhuthazwanga ukuthi uphuzwe ngemuva kosuku lokuphelelwa yisikhathi. KwiCombilipen, izinyanga ezingama-24, zeMexidol - iminyaka emi-3.
Imithi enomphumela ofanayo wemithi:
Kombilipen - Milgamma, Compligam B, Larigama,
I-Mexicoidol - I-Cerecard, i-Vitagamma, i-Emoxibel.
Izindleko zeCombilipen emakhemisi ngama-ruble ayi-133-300. kuya ngohlobo lokukhululwa. Intengo yeMexidol ihluka kusuka kuma-ruble angama-258 kuya kwangama-556.
UVictoria, oneminyaka engama-28, uTula
Ngemuva kokushaywa unhlangothi, ikhanda lihlukunyezwa. Udokotela unikeze umuthi wokuhlanganisa ngendlela yemijovo. Ngemuva komjovo wesibili, isimo saba ngcono.
U-Eugene, udokotela wobuntu, eMoscow
Ekwelapheni i-pancreatitis, ingxube yezidakamizwa isusa ukususa ubuthi emzimbeni. Ukufakwa komuthi kunconyelwa ukuba kuphathwe kuphela esibhedlela.
Ukwabelana ngezidakamizwa akunconyelwe iziguli ezine:
izinhlobo ezinzima ze-pathologies zesibindi.
Imithi esendleleni yezixazululo ezifakelwayo ayisetshenziswa ekwelapheni abesifazane abakhulelwe. Ekusebenzeni kwezingane, izidakamizwa azisetshenziswa. Ukuqapha kufanele kusetshenziswe lapho kunqunywa izidakamizwa kwiziguli esezikhulile.
I-Combilipen ingadala uhudo, ukwenyuka kwegesi.